गणेश विक काठमाडाैं : साेमवार एमजनप्रतिनिधिको अपशब्द बाेल्दै गाली गरेकाे अडियाे कल रेकर्ड अपशब्द बाेल्दै गाली गरेकाे अडियाे कल रेकर्ड सार्वजनीक भएकाे छ ।
यसरी फोन कल रेकर्ड भाइरल भएपछि कान्तिपथ डटकमले बझाङको केदारस्युँ गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष निसा धामीसंग सम्पर्क गर्यो। फोनमा उपाध्यक्ष धामीले सो कल रेकर्ड आफ्नै रहेको स्वीकार गरिन्। उनले भने, ‘मेरा विरोधीले मलाइ सिध्याउन यस्तो गरेकाे बताइन्।
फोनमा कुराकानीमा उनी निकै तनावमा रहेको बुझ्न सकिन्थ्यो। उनले निकै अश्लील शब्दको प्रयोग गरेकी थिइन्। उनले निकै अश्लील शब्द प्रयोग गर्दै कुरा गरेपछि यसबारे कुरा गर्दा उनले आफू तनावमा रहेको बताइन् । उनले भने, ‘मेरै पार्टीका मान्छेहरु लागेका हुन्।’ धामी तत्कालीन नेकपाबाट विजयी उपाध्यक्ष हुन्।
फाेन कल रेकर्ड जस्ताकाे तेस्तै सुन्नुहाेस् :
कहिले काहीं यसरी निदाइदिन मन लाग्छ कि मेरो आखाले अर्को बिहानि देख्न नपरोस मेरो कानले अरुको बोली सुन्न नपरोस,अनि मेरो मुटुले धडकनलाई पुरा बेवास्ता गरेर छोडीदेउ अनि कसै को रुवाइको मलाई कुनै अबगत नहोस अनि टाढिन खोज्नेहरुलाइ सधै लाई छुटकरा मिलोस.....
अन्धो त थिएन म तर
मानव हरु लाई चिननै sakin,,,,,,...
आफ्नो जीवन सङ आफै
राजू जाग्री : चिन्ता परो झन् रोयको रोय छ यो मन घुस खानाले डरले चिन्ता परो झन्
Nisha Thagunna Dhami : tero bau le diyo ghus sala kati diyko thies kukur...manxe chiner bol sala kukur khate t jasto khate hu r kukur ...
फोन काण्ड के हाे ?
उपाध्यक्ष निशा र जाग्रीबीचको विवाद फेसबुक पोस्टसँग मात्रै सम्बन्धित देखिएकाे छैन । उनीहरुको कुराकानीबाट स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ, कुरा लेनदेन वा भनसुनसँग जोडिएको छ ।
याे बिषयमा कान्तिपथ मिडियाले कल रेक्रर्ड फेला पारेपछी उपाध्यक्ष निसा धामी सँग कुरा गर्दा मैले कसैकाेबाट एक चिया पनि खाएकाे छैन् मलाइ घुस खायाे भनेपछी मैले गाली गरेकाे हाे उक्त गाली बेज्यत गरेकाे कुरा धामीले कान्तिपथ मिडिया संग कुरा गर्दै स्विकार गरेकी छन् ।
उपाध्यक्ष निशा के भन्छिन् ?
उपाध्यक्ष धामीले कान्तिपथ सँग कुरा गर्दै राजुले केदारस्युँ गाउँपालिकामा लागू भएको बालशिक्षामा आफूलाई राख्नुपर्ने माग राख्दै आएका थिए । राजुले आफूलाई बालशिक्षा कोटामा राख्न भन्दै एउटा मान्छेलाई पैसा दिएर आफूलाई भेट्न लगाएको र आफूबाट अस्वीकार भएको उपाध्यक्ष धामीको भनाइ छ ।
उक्त विषयमा कान्तिपथ मिडियाले राजु जाग्री सँग कुरा गर्दा धामीले तीन लाख चलखेल गरेकाे बताएका छन् उक्त रेक्रर्ड कान्तिपथ सँग सुरक्षित छ ।
जाग्री के भन्छन् ?
बालशिक्षामा अनियमितताबारे कुरा सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएकाले आफूले लेखेको उनको तर्क छ । उपाध्यक्ष निशाले बालशिक्षामा भ्रष्टाचार गरेको प्रमाण आवश्यक परे देखाउन तयार रहेको दाबी जाग्रीले गरेका छन् ।
जिम्मेवार पदमा आसिन तपाईंजस्तै व्यक्तिले त्यसरी गाली किन गर्नुभयो भन्ने प्रश्नमा उपाध्यक्ष धामीले भनिन्, ‘म आवेशमा थिएँ, निराधार आरोप लगाएकाले मैले रिसको आवेगमा त्यसरी गाली गर्न पुगेँ ।’
लामाे समय देखी ,,,केदारस्युँ गापाले निर्माण गरेको सडक विवादित, रकम हिनामिनाको आरोप
बझाङको केदारस्युँ गाउँपालिकाले निर्माण गरेको सडक विवादित बनेको छ ।
उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीले रकम हिनामिना गरेको आरोप लागेपछि निर्माणाधीन सडक विवादित बनेको हो ।
२०७१ सालदेखि निर्माणाधीन बझाङको केदारस्युँ गाउँपालिकाअन्तर्गत्कोे सडकखन्डमा २०७१ सालदेखि २०७४ सालसम्म एउटा उपभोक्ता समितिले काम गरेको थियो । २०७४ सालदेखि अर्को उपभोक्ता समिति गठन गरी काम गरिएको छ ।
दुवै समितिबाट अहिलेसम्म बागथलदेखि सुदाडाको छिल्लेकसम्म झन्डै ७ किलोमिटर सडक निर्माण भइसकेको छ ।
जसमा नयाँ समितिले ७२ लाख रुपैयाँको लागतमा करिब चार किलोमिटर सडक बनाएको छ । तर, पुरानो समितिले झन्डै दोब्बर लागतमा तीन किलोमिटर सडकमात्र निर्माण गरेको बताइएको छ ।